Bangend emgwaqweni befuna "ukuqashwa" - Ilanga News
Home Izindaba Bangend emgwaqweni befuna “ukuqashwa”
Bangend emgwaqweni befuna “ukuqashwa”
Osonhlalakahle bathi kusuka ngoMashi kabakaze baholelwe
OSONHLALAKAHLE baviliyele neminyezane yabo emigwaqweni yedolobha eMgungundlovu, bekhala ngokungaqashwa ngokugcwele wuMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal.
KUQHUME izinhlamvu zenjoloba, kwavimbanisa isisi esikhalisa unyembezi, osonhlalakahle begcwala imigwaqo bebaleka ngesikhathi behlakazwa ngamaphoyisa njengoba bebenombhikisho obubheke ekomkhulu loMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, behambise uhlu lwezikhalo zabo ngoLwesibili.
Kulesi sehlakalo kulimale abathathu baze bayiswa esibhedlela, kanti phakathi kwezikhalo zosonhlalakahle, wukungaholelwa kusukela ngoNdasa (March) nokungaqashwa ngokugcwele.
UMnu Sithabiso Gumede ongusonhlalakahle, obekhulumela abebebhikisha, ukhale ngokubanjiswa isisila sehobhe wumnyango kusukela ngo-2017.
Uthe lo mnyango wawubaqasha ubathumela ezinhlanganweni ezingayenzi inzuzo ukuba basebenze nazo, bemele wona.
“Esikubanga nomnyango wukuthi lokhu kuqashwa kwethu akucacile njengoba siye sithi uma sibuza ngomsebenzi wethu, sitshelwe ukuthi masixhumane nezinhlangano ezingayenzi inzuzo esisebenza kuzona.
“Siye sithi uma siya kuzona lezi zinhlangano, sitshelwe ukuthi kasiqashiwe yizona, masiye emnyangweni owasithumela kuzona.
“Mhla siqashwa, safonelwa ngabomnyango kangangoba inhlolokhono sasiyenzela emahhovisini awo.
“Kuyasixaka ukusiphika ngoba konke esikwenzayo kusuke kunophawu lukahulumeni waKwaZulu-Natal. “sixatshaniswa ngamaholo nawo. Sinenkinga yokungaholelwa njengoba selokhu sagcina ngoNdasa nonyaka, kodwa umsebenzi ufunwa nyanga zonke kithina.
“Okubuhlungu nabezinhlangano ezingayenzi inzuzo kabasasifuni emsebenzini wabo, bayasixosha emahhovisi.
“Sifuna umnyango usicacisele ukuthi ngempela thina kanti siqashwe ngubani futhi kanjani. Sihleli sizithumela izincwadi zezikhalo zethu zingaphendulwa, yingakho namhlanje sifuna ukukhuluma nongqongqoshe, uNkk Nonhlanhla Khoza.
“Kuyasixaka uma sesidutshulwa ngoba konke esikwenzayo kusemthethweni, kasiphazamisi muntu,” kusho uMnu Gumede.
Inhloko yomnyango, uNkk Nelisiwe Vilakazi, ebiyokwamukela uhlu lwezikhalo zosonhlalakahle, bayichithile bekhala ngokuthi izincwadi zabo zaphambilini kayiziphendulenga, sebefuna ukuzikhulumela ngqo noNkk Khoza.
ILANGA ebelikhona kuchithwa uNkk Vilakazi, limbonile nezinye izikhulu zomnyango bebuyela ngaphakathi emahhovisi bethembisa osonhlalakahle abebevale amasango ukuthi basayobheka izikhalo zabo zaphambilini ukuthi kwagcina kuhlangatshezenwe yini nazo.
Osonhlalakahle bamtshele ukuthi ngoba kabagculisekile ngakwenza kubona, makahambe abuye nongqongqoshe, hleze yena abezwe mayelana nezikhalo zabo.
Emuva kokuba ehambile, kuqhamuke amaphoyisa ophiko lwe-public order avulela ngezinhlamvu zenjoloba, ehlakaza osonhlalakahle abebenkanise phambi kwesango.
Okhulumela amaphoyisa ase-Mgungundlovu, uSgt Mthokozisi Ngobese, uthe amaphoyisa ethimba le-POP ahlakaze osonhlalakahle ngesisi esikhalisa unyembezi nezinhlamvu zenjoloba emuva kokuqhinqa emasangweni oMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal. Akuboshwanga muntu mayelana nalesi sigameko.
Previous articleUBen 10 uhalela ukudlala e-England
Next articleIphoyisa “lidubule labulala umfowabo”